@ Vintage Studio 2 (Isikhungo Somlando) - I-Airbnb
@ Vintage Studio 2 (Isikhungo Somlando)
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, i-Mexico
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Levi & Sylvia
Isitudiyo sethu sivulekile futhi sinempilo, sitholakala enhliziyweni yesikhungo esiphilayo samakholoni imizuzu emi-5 nje sihamba siya e-Santo Domingo nomdweshu omkhulu i-Calle Macedonio Alcala. I-WIFI ishesha ngu-29mbps. Kungaba khona umsindo ngezimpelaviki njengoba siphakathi kwamabha, ama-mezcaleria, izindawo zokudlela, amagalari, izitudiyo zobuciko kanye nokudla komgwaqo. Lesi situdiyo singaphakathi kwesakhiwo samagugu esihle. Sinekhishi elincane elinezidingo eziyisisekelo.
Ifulethi lingaphakathi kwesakhiwo samagugu esikhungweni somlando, indawo yokungena yabelwana namanye amafulethi. Ifulethi lethu selibuyisiwe, ngakho liyingxube endala nentsha. Igumbi lokugezela linomuzwa we-rustic wase-Mexican. Uzodinga ukugibela izitebhisi ukuze ungene estudiyo.
4.60 · 72 okushiwo abanye
Isikhungo somlando siyindawo ephilayo. Sikhona enhliziyweni yesikhungo somlando esizungezwe ama-mezcalerias, amabha, izindawo zokudlela, amagalari kanye nokudla okumnandi komgwaqo.
Ibungazwe ngu-Levi & Sylvia
Ngokuvamile singekho, kodwa sitholakala njalo ngomlayezo noma ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Oaxaca de Juárez namaphethelo